မြန်မာ့ရေခဲသမိုင်းတွင် အရေးပါခဲ့သည့် ဆူးလေလမ်းပေါ်က ဒိုင်းမွန်းရေခဲစက်
လမ်းလျှောက် မြန်သူတွေဟာ ပုံမှန်ထက်ပိုပြီး အသက်ရှည်ကြကြောင်း လေ့လာ တွေ့ရှိ
ဆက်ဆောက်မယ် ဆိုရင်တော့ ငြိမ်းချမ်းရေး ပျက်နိုင်ပါတယ်
ကုန်စည်ဖလှယ်စနစ်ဖြင့် တရုတ်ရွှေချိုက်ကုမ္ပဏီနှင့် ဆန်တန်ချိန် ၁ သိန်း ရောင်းရန် စာချုပ်
လေ့လာမှုတွေအရ မိဘတွေဆီကနေ မျိုးရိုးလိုက်တတ်တဲ့ မကောင်းတဲ့ ဗီဇများ
တိရစ္ဆာန်သင်္ချိုင်း အလွန်က တားမြစ်နယ်မြေ (သို့မဟုတ်) "Pet Sematary"
ပြည်တွင်း၌ သကြား တန် ၁ သိန်းခွဲကျော် ပိတ်မိနေ၍ သကြားဈေးကျဟုဆို
"ဂီတကို သေတဲ့အထိ လုပ်ကိုင်သွားမယ်"လို့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း ပြော
ဆံပင်တုတပ်တဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မိုးဟေကိုအား တောင်းပန်ခဲ့ရတဲ့ နေခြည်ဦး
ဆိုလာစနစ်သုံး ပလတ်စတစ်ဘူး မီးချောင်းတွေနဲ့ အလင်းပေးနေတဲ့ “Liter of Light” စီမံကိန်း
လပွတ္တာတွင် သင်္ဘောမှောက် ၂ ဦးသေပြီး ၅ ဦးပျောက်ဆုံးနေ
အလွယ်တကူ ပြင်ဆင်နိုင်တဲ့ ကိုရီးယားစတိုင် မနက်စာ ပေါင်မုန့်မီးကင်
ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်က ခေါင်းနီ ကြိုးကြာ
မည်သည့်လောင်းရိပ်မျှ မရှိဟု ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းများ ပါတီသစ်က ဆို
မန္တလေးတွင် လမ်းမြေပေါ် ကျူးကျော်နေထိုင်သူ ၃ ဦးကို ပုဒ်မ ၄ ခုဖြင့် အမှုဖွင့်
မင်းသား Keanu Reeves အကြောင်း သင်မသိသေးတဲ့ အချက် ၅ ချက်
ဇနီးအတွက် ဒုတိယမြောက် သီချင်းတပုဒ် ရေးပေးထားတဲ့ သရုပ်ဆောင် ဇဏ်ခီ
မဟာသီယာ အရိုက်အရာ ဆက်ခံရေး ရှုပ်ထွေးလာနေ
အသည်းကွဲပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ပိုလှလာတဲ့ Makeup Artist မထက် (Pop Soul)
နောက်တကြိမ် ပြန်လည် ရိုက်ကူးမယ်ဆိုရင်တောင် လူကြိုက်များနေဦးမယ့် ရုပ်ရှင်များ
ပြည်ပက မျက်နှာသစ် ပြိုင်ဘက်များ ဝင်လာတော့မည့် ပို့ကုန်ကဏ္ဍ
အလှအပရေးရာ အတွက် နာနတ်သီးရဲ့ အသုံးဝင်ပုံများ
ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်ချက်များ ဆွေးနွေးမှုတွင် တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ် အများဆုံးပါဝင်ရန် စာရင်းသွင်း
သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုတွေ ဖြစ်မလာအောင် ဘယ်လို ကြိုတင် ကာကွယ်ထားသင့်သလဲ
ကျန်းမာရေး ပြဿနာအချို့ကို ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်း နည်းလမ်းများ
မြေနုကျွန်း ပဋိပက္ခ ၁၀ ရက်အတွင်း စစ်ဆေးရန် ဝန်ကြီးချုပ် ညွှန်ကြား
တရုတ်ခရီးသွား လာရောက်မှု ယမန်နှစ်ထက် ၂သိန်းနီးပါး တိုးလာ
စည်ပင်ရိပ်သာ ဗုံးသတင်း Facebook တင်ခဲ့သူက တရားစွဲခံရမှု ရင်ဆိုင်မည်ဟု ဆို
ဗစ်တိုရီးယား ဓာတ်ပုံများ ဖြန့်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်သူကို တရားစွဲရန်ပြင်
ထိုင်း-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ တိုးမြှင့်မည်
အောင်သပြေဖြစ်စဉ် ဖမ်းဆီးထားသူများအား ရုံးထုတ်စစ်ဆေး
ကျောကင်မရာ ၄ လုံးနဲ့ ပွဲထွက်လာတဲ့ Huawei Nova 5i Pro စမတ်ဖုန်း
တန်ဖိုးနည်း ဖုန်းမော်ဒယ်သစ် "Honor 8S" ကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ စတင်ရောင်းချ
တပ်ချုပ်အပေါ် အမေရိကန်၏ ပိတ်ဆို့မှု အနိုင်ကျင့်သည့် လုပ်ရပ်ဟု တပ်မတော် ပြော
၂၁ ရာစုပင်လုံ စတုတ္ထ အစည်းအဝေးကို KNU မပါလျှင်ပင် ကျင်းပသွားဖွယ်ရှိ
အိမ်မွေးခွေးအဖြစ် မွေးပြီး ၂ နှစ်ကြာမှ ခွေး မဟုတ်ဘဲ ဝက်ဝံဖြစ်နေမှန်း သိခဲ့ရတဲ့ ဖြစ်ရပ်
မြန်မာ့အသံ ညွှန်ချုပ်ကို ရာထူးမှ ထုတ်ပယ်
AA ကို ထောက်ပံ့မှုနှင့် စွပ်စွဲဖမ်းဆီးထားသူ ၉ ဦးအမှု ချုပ်ရမန် ထပ်ယူ
Intel ရဲ့ Modem လုပ်ငန်းကို ဒေါ်လာ ၁ ဘီလျံနဲ့ Apple ဝယ်ယူ
ဆူးလေဘုရားလမ်းပေါ်ရှိ ရှေးဟောင်း အဆောက်အအုံဖြစ်သည့် “The Castle” ဟု အမည်ပေးထား သော ဒိုင်းမွန်းရေသန့်နှင့် ရေခဲစက်ရုံ / မျိုးမင်းစိုး / ဧရာဝတီ
By Jolly I C S 29 July 2019
ရန်ကုန်မြို့လယ် ဆူးလေဘုရား လမ်းမကြီးပေါ်၌ နေ့စဉ် လူဦးရေ သောင်းနှင့်ချီ၍ ဝင်ထွက်သွား လာ လျှက်ရှိကြသော်လည်း ယင်းလမ်းမပေါ်ရှိ ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ် စာရင်းဝင် အဆောက်အဦတလုံး ကိုတော့ အမှတ်တမဲ့ ဖြတ်သန်း သွားကြပေ လိမ့်မည်။
ထိုအဆောက်အဦက ရန်ကုန်မြို့လယ် မီးသတ်ဌာနနှင့် မျက်စောင်းထိုးရှိ ယခု AA PHARMACYနှင့် Strategy First University တို့ ဖွင့်လှစ်ထားသည့် အနီရောင် အဆောက်အဦကြီးဖြစ်၏။
ထိုအနီရောင် အဆောက်အအုံကြီး၏ ရာဇဝင်က မြန်မာ့ ရေခဲသမိုင်းနှင့်လည်း ဆက်စပ်နေသည်။
ယင်းနေရာတွင် ကိုလိုနီခေတ်က Perseverance Ice Factory (ဇွဲ ရေခဲစက်)ဟူ၍ ရှိခဲ့ပြီး နောင်တွင် ဆိုရှယ်လစ်ခေတ် တိုင် နာမည်ကြီးခဲ့သည့် ဒိုင်းမွန်းရေသန့်နှင့် ရေခဲစက်ရုံ (Dimon Ice and Aerated Water Factory)၏ နေရာဟောင်း ဖြစ်သည်။
မှတ်တမ်းမှတ်ရာများ အရမူ အဆောက်အဦ၏ မူလအမည်မှာ The Castle “ရဲတိုက်” ဟုလည်း ခေါ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မူလ ဇွဲ ရေခဲစက်နှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်တမ်းများ မတွေ့ရသေးသော်လည်း၊ ဒုတိယမြောက် ဒိုင်းမွန်းရေခဲစက်နှင့် ပတ်သက် ၍မူ ဤသို့ သိရ၏။
ဒိုင်းမွန်း ရေခဲစက်ပိုင်ရှင် မစ္စတာ ဂျေ အီး ဒူးဘန်း
ဒိုင်းမွန်းရေခဲစက် ပိုင်ရှင်၏ အမည်မှာ မစ္စတာဒူးဘန်း ဖြစ်ပြီး၊ သူ၏ အမည်ဖြင့် လမ်းတလမ်း ရန်ကုန်မြို့တွင် ရှိခဲ့ပြီး ယခုအခါ မလိခလမ်းဟု အမည်ပြောင်းလဲပြီးဖြစ်သည်။
ရေခဲသေတ္တာနှင့် ရေခဲစက်များ မပေါ်ပေါက်မီ ကာလက ကမ္ဘာ့အပူပိုင်း ဒေသများရှိ ကိုလိုနီနယ်များသို့ သွားရောက်ကြ သည့် ဥရောပတိုက်သားများ အလိုလား အတောင့်တဆုံး အရာမှာ ရေခဲသာဖြစ်၏။
အလားတူ မြန်မာနိုင်ငံ၌ တာဝန်ကျနေသည့် အရာရှိများနှင့် လာရောက် စီးပွားရှာကြသော ဥရောပ သား များသည်လည်း အခြား ကိုလိုနီ နယ်များ နည်းတူ အပူဒဏ်ကို သက်သာစေရန် ဧည့်ခံပွဲနှင့် ကလပ် အစရှိသည့် နေရာများ၌ အပန်းဖြေ ရာတွင် ရေခဲသည် အရေးပါဆုံး ကုန်စည်ဟု ဆိုရမည်။
အခြားလူသုံးကုန်၊ စားသောက်ကုန်နှင့် အရက်ဘီယာများမှာ ရန်ကုန်မြို့သို့ ဆိုက်ရောက် လာသော သင်္ဘောများ ထံမှ လည်းကောင်း၊ ဖွင့်လှစ်ရောင်းချ လျှက်ရှိသောဆိုင်များမှ လည်ကောင်း အချိန်မရွေး ဝယ်ယူရရှိနိုင်သော်လည်း ရေခဲ ကတော့ အချိန်ရွေး မရရှိနိုင်ပါ။
၁၈၇၁မှ ၁၈၇၅ ခုနှစ် အထိ တာဝန်ယူ အုပ်ချုပ်ခဲ့သည့် မဟာဝန်ရှင် တော်မင်းကြီး ဆာ အက်ရှလီ အီဒင် လက်ထက်တွင် ရန်ကုန်မြို့၏ ပထမဆုံး အီသာစနစ်သုံး ရေခဲထုတ်လုပ်ရေး (Ether System Ice Production) စက်ကို ပြင်သစ် လူမျိုး မစ္စတာ ဂျား မှ ရန်ကုန်မြို့၌ စတင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
ထိုစဉ်က ဗြိတိသျှတို့ မန္တလေးမြို့ကိုပင် မသိမ်းပိုက်ရသေးပေ။
ထို့နောက် မြန်မာပြည် ရေသန့်နှင့် ရေခဲစက် ကုမ္ပဏီ (Burma Ice and Aerated Water Co.,Ltd) ကလည်း အမိုးနီးယား ရေခဲစက် (Ammonia Absorption System) ရေခဲစက်ကို စတင်တည်ထောင် ထုတ်လုပ်ရောင်းချခဲ့သလို၊ ရေနံကုမ္ပဏီ (BOC)၏ ဓနိတော အီသာရေခဲစက်မှလည်း ရန်ကုန်လူထု အတွက် ရေခဲထုတ်လုပ် ဖြန့်ချိ ပေးခဲ့ဖူးသည်။
အလားတူ Distillery Ice and Aerated Water. Co.,Ltd မှလည်း ရေခဲစက်နှစ်လုံးနှင့် ထုတ်လုပ် ဖြန့်ဖြူးခဲ့သော်လည်း ရေခဲလိုအပ်ချက်မှာ ဆက်လက် မြင့်မားဆဲဖြစ်သည်။
ဒိုင်းမွန်း ရေခဲစက် မတည်ထောင်မီ အထိ ရန်ကုန်မြို့၌ ရေခဲပေါက်ဈေး မှာ ၁ပေါင်လျှင် ၁ပဲ (One Anna) ဖြစ်ပြီး ၊ ပူပြင်းသော ကာလများနှင့် နွေရာသီ၌ ရန်ကုန်မြို့ရေခဲပေါက်ဈေးမှာ မူလ ပေါက် ဈေးထက် နှစ်ဆ ပိုပေး၍ ဝယ်ယူခဲ့ကြရပါသည်။
ထိုသို့ ရေခဲရှားပါးပုံကို မြန်မာပြည်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖူးသည့် စာရေးဆရာကြီး George Orwell က ကမ္ဘာကျော် Burmese Day “မြန်မာပြည်နေ့ရက်များ” ဝတ္ထုထဲ၌ပင် ကသာမြို့ ရှိ မျက်နှာဖြူ ကလပ်၌ ရေခဲမရှိ၍ အဆင် မပြေဖြစ်ရပုံ၊ ညည်းညူပုံ ဇာတ်ဝင်ခန်းများ ထည့်သွင်းရေး သားခဲ့ပါသည်။
ကိုလိုနီခေတ်က ဒိုင်းမွန်းရေခဲစက်နှင့် အဆောက်အဦပုံ
စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ကောင်းမွန်ပေါများခြင်းကြောင့် ရန်ကုန်မြို့၌ အခြေချ နေထိုင်သူ ဥရောပသားများ တနေ့ထက် တနေ့ တိုးပွားလာနေသည်။
ထို့အတွက် ရေခဲစက်တည်ထောင် လုပ်ကိုင်ပါက အကျိုးအမြတ်များနိုင်မည်ကို တွက်ချက်ခန့်မှန်း နိုင်သူ မစ္စတာဒူးဘန်း သည် Du Bern Co.,Ltd (ဒူးဘန်းကုမ္ပဏီ)အမည်ဖြင့် မှတ်ပုံတင်၍ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကလကတ္တားမြို့ရှိ Crystal Ice Factory နှင့် ဆက်သွယ်၍ ရေခဲစက်တလုံး ဝယ်ယူ ခဲ့သည်။
ထို့နောက် အမှတ် (၆) ဆူးလေဘုရားလမ်းရှိ ယခင် ဇွဲရေခဲစက် (Perseverance Ice Factory) နေရာဟောင်း၌ ဒိုင်းမွန်း ရေသန့်နှင့် ရေခဲစက် (Diond Ice and Aerated Water Co.,Ltd) အမည်ဖြင့် တူဖြစ်သူ ရေခဲစက် အင်ဂျင်နီယာ မစ္စတာ AG. Du Bern နှင့်တွဲ၍ စတင်တည်ထောင် ခဲ့၏။
ရေခဲဈေးကို ပေါက်ဈေး ၁ပေါင်လျှင် ၁ပဲ (One Anna)မှ တပေါင်လျှင် ၂ပြားနှုံး (2paise)ဖြင့် ဈေးချကာ ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချပေးခဲ့သည်။
မစ္စတာဒူးဘန်းမှာ တယ်လီဖုန်း အင်ဂျင်နီယာဖြစ်သော်လည်း တူဖြစ်သူ AG.Du Bern မှာ ကာလကတ္တားရေခဲစက်အသင်း အင်ဂျင်နီယာ ဖြစ်သောကြောင့် အပြိုင်အဆိုင်များလှသော ရန်ကုန် ရေခဲစက် လောကကို အလွယ်တကူ တိုးပေါက်နိုင်ခဲ့သည် ဟု ဆိုရမည်။
ထို့အတွက် ဈေးကွက်ကို အုပ်စီးမိပြီး ရောင်းမလောက်အောင် ဖြစ်လာသဖြင့် ဆူးလေဘုရားလမ်း ရေခဲ စက်ရုံ၏ အနောက် ကျောခြင်း ကပ်လျှက် ရှိသည့် ၃၃လမ်းပေါ်၌ ပေ ၁၅၀ × ပေ ၄၀ အကျယ်မြေ ကိုဝယ်ယူပြီး၊ ကာလကတ္တားမှ နောက်ဆုံး ပေါ် ရေခဲစက်နှင့် အအေးခန်းစနစ်ပါ စက်ရုံ တရုံကို ၁၉၀၅ ခုနှစ်တွင် ထပ်မံ တိုးချဲ့ခဲ့ပါသည်။
ထပ်မံ တိုးချဲလိုက်သော ၃၃လမ်းဘက်ခြမ်း စက်ရုံ၌ အသုံးပြုသော ရေခဲစက်မှာ နောက်ဆုံးပေါ် ရေခဲစက် နည်းပညာဖြစ်ပြီး၊ အမိုးနီးယားဓာတ်ငွေ့၌ ရေမပါဝင် သလာက် နည်းသော စံနစ်သုံး ရေခဲစက် (Anhydrous Ammonia System) ဖြစ်သည်။
၎င်း ရေခဲစက်သစ် တည်ပြီးသောအခါ ရေခဲပိုမိုထုတ်လုပ်လာနိုင်ပြီး၊ ရေခဲစက် အပေါ်ဆုံးထပ်တွင် အပူကာ (Insulation) များဖြင့် တပ်ဆင်ထားသော အအေးသိုလှောင်ခန်းတွင်း၌ အသား၊ ဟင်းသီး ဟင်းရွက်၊ သစ်သီး၊ နွားနို့စသည်များကို သီးခြားစီသိုလှောင်ထားနိုင်ခဲ့သည်။
အာရှအရှေ့ဖျားနိုင်ငံများ၌ ပထမဆုံးပိုးသတ်သန့်စင်ပြီး၊ ပုလင်းသွတ်နို့ပုလင်းများကို ၁၉၀၂ ခုနှစ်မှ စ၍ထုတ်လုပ်ခဲ့သူမှာ ဒူးဘန်းကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီပိုင် မှော်ဘီနွားခြံများမှ ရထားဖြင့်သယ်ပြီး၊ ရန်ကုန်၌ပုလင်းသွတ်ရောင်းချခဲ့ရာ တနေ့လျှင် ဂါလန် ၃၀၀ ရောင်းအားရှိခဲ့သည်။
ဒိုင်းမွန်ရေခဲစက်မှ ထုတ်လုပ်သည့် ရေသန့်ကြော်ငြာ
ရေသန့်ထုတ်လုပ်ရေးအပိုင်းမှာ မစ္စတာဒူးဘန်းကိုယ်တိုင်ဦးစီးပြီးလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဆူးလေဘုရားလမ်း ဘက်ခြမ်း စက်ရုံ၌ ၁၈၉၄ ခုနှစ်တွင် ၃လက်မ၊ အဝိစီတွင်းတူးပြီးရေသန့်စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ရာ ယင်းမှာ မြို့လယ်ရပ်ကွက်များတွင် ပထမဆုံး တူးသောအဝိစီတွင်းဖြစ်သည်။
ရေသန့်လုပ်ငန်း အတွက် အကျယ်အဝန်း မလုံလောက်တော့သဖြင့် ဘေးချင်းကပ်၊ မြေကွက်အား ဝယ် ယူပြီး၊ ၁၉၀၄ခုနှစ်တွင် မစ္စတာဒူးဘန်း ကိုယ်တိုင်ပုံစံထုတ် ဆောက်လုပ်ခဲ့သည့် ခန့်ညားသည့် အဆောက်အဦကြီးကို ယနေ့တိုင် တွေ့မြင်နိုင် ပါသေးသည်။
ဒိုင်းမွန်ရေသန့်သည် ထိုသို့သော ခန့်ညားသည့် အဆောက်အအုံကြီးသာမက အသုံးပြုသောရေ၏ သန့်စင်ခြင်းနှင့် ခေတ်အမှီဆုံး ပုလင်းဆေးကြောသန့်စင်ခြင်း စံနစ်တို့ကြောင့် ပထမတန်းစာရင်းဝင် နိုင်ခဲ့ပြီး၊ ၁၀နာရီအတွင်း ၁၉၉၅ ဒါဇင် ထုတ် နိုင်ခဲ့ပြီး၊ ၃တန်ကား နှစ်စီးဖြင့် ရန်ကုန်မြို့အနှံ ရောင်းချ ပေးခဲ့ပါသည်။
ဒိုင်းမွန်းရေခဲစက် ပိုင်ရှင် မစ္စတာ ဒူးဘန်း (J.E Du Bern) သည် ၁၉၀၉ ခုနှစ်တွင်ရန်ကုန်မြူနီစီပါယ် ကော်ပိုရေးရှင်း၏ ဒုဥက္ကဌဖြစ်ပြီး၊ တူဖြစ်သူ မစ္စတာ AG.Du Bern သည် B.A.A (Burma Athletic Association) ၏ ဂုဏ်ထူးဆောင် အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့ကြသည်။
ဆူးလေဘုရားလမ်းပေါ်ရှိ ရှေးဟောင်း အဆောက်အအုံဖြစ်သည့် “The Castle” ဟု အမည်ပေးထား သော ဒိုင်းမွန်းရေသန့်နှင့် ရေခဲစက်ရုံ (မျိုးမင်းစိုး/ဧရာဝတီ)
သို့သော် လုပ်သားဦးရေ ၁၀၀ ကျော် ခန့်ထား ထုတ်လုပ်ခဲ့သော ဒိုင်းမွန်းရေသန့်နှင့် ရေခဲစက်ရုံသည် လည်း တော်လှန်ရေး ကောင်စီ လက်ထက် ၊ ပြည်သူပိုင်အသိမ်းခံရပြီး ၊ စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်း ကော်မတီ အမှတ်(၁၅) အောက်သို့ သွတ်သွင်း ခံလိုက်ရပြီးနောက် နိဋ္ဌိတံခဲ့လေသည်။
Jolly I C S သည် ကိုလိုနီခေတ် အဆောက်အအုံများနှင့် ပတ်သက်သည့် အကြောင်းအရာများကို လေ့လာနေ သူဖြစ်သည်။
You May Also Like These Story:
၈၈၈၈ ျပခန္း ဝန္ႀကီးမ်ား႐ုံးတြင္ ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္
ဘတ္စ္ကား မွတ္တိုင္သစ္တြင္ အမည္ရင္း ေပ်ာက္ခဲ့ရသည့္ သူေဌးႀကီး ခ်န္မာဖီ
Topics: ဒိုင်းမွန်း, ရေခဲ, ရေခဲစက်
Jolly I C S Contributor